Militeriga oo la dhigay goobaha muhiimka - BBC News Somali
Militeriga oo la dhigay goobaha muhiimka
3 Luulyo 2013
Image caption Xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka Masar ayaa ah mid aad u qasan
Ciidanka militeriga ee dalka Masar ayaa waxa la dhigay goobaha muhiimka ee magaalada Qaahira iyada oo tobanaan kun oo dad banaanbaxaya ah ay sugayaan hadal siyaasadeed oo ka soo baxa xiisadda siyaasadeed ee dalka gilgishay.
Hoggaanka Sare ee milateriga dalka Masar ayaa sheegay in ciidamada qaranku ay diyaar u yihiin inay ka difaacaan dalka dhibaato kasta iyo khatarta kooxaha ay ugu yeedheen'argagixiso iyo wax-ma-garadka'.
Hadalkani ka soo yeedhay milaterigu waxa uu ka dabeeyey khudbad aad u kulul uu xalay ka jeediyey telefishannada dalkaasi, madaxweyne Maxamad Morsi, uguna baaqay in milaterigu ka noqdo digniintii hore ay u bixiyeen, isla markaasina ku adkaystay in aanu bedeleyn mawqifkiisa, aqbalaynna in wax loo yeedhiyo, maa daama uu yahay madaxweynihii sharciga ahaa ee la soo doortay.
Madaxweynaha dalka Masar Maxamad Morsi ayaa horeba ugu gacansaydhay digniinta kama dambaysta ah ee hoggaanka milaterigu ku siiyey xukuumadda dalkaasi iyo mucaaradka labadaba in muddo 48 saac ay la yimaaddaan xal, muddadaasi oo imika saacado yari ka hadhsan yihiin.
Image caption Tobanaan kun ayaa weli mudaharaadaya dalka Masar
Image caption Fakaaraha Taxriir baaqii milatri ka bacdi
Milaterigu waxay ku hanjabeen inay soo faragelin doonaan haddii aan dawladda iyo mucaaradku la iman xal siyaasadeed, ayna samayn doonaan qorshe siyaasadeed oo ay ka mid yihiin in la laalo dastuurka haatan yaal, in la kala diri doono baarlamaanka imika, iyo in la samayn doono dawlad ku-meel-gaadh ah ilaa inta la abaabulayo dastuur kale oo cusub iyo doorashooyin.
Dhinaca kale, ilaa hadda waxa iscasiley wasiirro badan iyo ma'uuliin kale oo ka tirsanaa xukuumadda madaxweyne Maxamad Morsi, kuwaasi oo uu ku jiro wasiirkii arrimaha debadda Maxamad Kaamil Amr.
Waxa kale oo halkoodii ka sii socda mudaaharaadyadii rabshadaha watey oo dad ku dhinteen, in kale oo badanina ay ku dhaawacmeen maalmahani. Isku dhacyo dhacay xalay, khudbaddii madaxweyne Morsi ka bacdi, waxa ku dhintay ilaa 16 qof, in ka badan laba boqolna way ku dhaawacmeen.
Isniintii waxa la weeraray, lana bililiqaystay xaruntii ururka Ikhwaanu-Muslimiin ee magaalada Qaahira. Axaddii dhaweydna, malaayiin qof ayaa la sheegay inay bannaanbaxyo ka oogeen dhammaan magaalooyinka dalka masar, kuwaasi oo ku baaqayey in madaxweyne Maxamed Morsi uu iscasilo.